Uthando uphawula indoda: indlela yokwenza nokuthi yimiphi imiphumela? Indlela yokuhlonza isipelingi sothando nokuthi yini okufanele uyenze kulokhu?
Intuthuko engokomoya, Imfundiso
Kuyinto engavamile ngesimo lapho ukupela kwendoda kumuntu kubonakala sengathi yindlela kuphela yokulondoloza umndeni owohloka ngokoqobo phambi kwamehlo ethu. Kodwa kaningi futhi umfazi uqala ukusola ukuthi umyeni wakhe osemthethweni wayekhishwa - ngakho akunangqondo futhi engavamile ukuziphatha kwakhe. Ungaba kanjani ezimweni ezinjalo?
Indlela yokushayela indoda: inkolelo
Kudingekile ukuqala ngencazelo yalokho isipelingi ngokwayo. Amaqondana nemilingo athi lokhu kuyithonya langaphandle, okuyinto, ngokusebenzelana nemilingo, ixhuma amadoda nabesifazane abathile, kungakhathaliseki ukuthi bazizwa kanjani kusukela ekuqaleni. Okusho ukuthi ukuthanda umyeni wakhe kuyothatha uthando noma kubangele imizwelo efana nothando. Esikhundleni salokho, ukhetho lwesibili lungalungile, ngoba imizwa yangempela iyinkimbinkimbi kakhulu ukuvusa ngobuciko. Ngakho-ke ungathemba ukukhathazeka, ukukhanga, uthando, okuyinto ngaphansi kwezimo ezinhle eziyokhula zibe umuzwa wangempela.
Futhi, ehlose ukwenza isipele kumyeni wakhe, umuntu kumele aqonde ukuthi lolu uhlobo lwenkohlakalo. Kuphela akubangelwa yisifo, kusho isibindi noma izinso, hhayi inhlanhla ephelele. Kodwa okusemqoka okufanayo. Phela, ukuthanda izinto zemvelo kwento yokupela isipela kubonakala sengathi kususiwe, futhi esikhundleni sabo kukhona into ehluke ngokuphelele.
Ukuze lo mcimbi uphumelele, kuyadingeka ukuthi imithetho ibhekwe:
Ukwenza umkhuba kumele ube ngumuntu owazi kahle emlenzeni.
I-spell ngokwayo kufanele isekelwe ekuphenduleleni emibuthanweni yokukhanya, kodwa hhayi emademoni noma eminye iminyango emnyama.
Inqubo yokwenza iphutha kufanele iphephile (okungukuthi, ngaphandle kokubangela ukulimala kwabantu kanye nezenzo ezifanayo ezijeziswa ngumthetho).
Uhlobo lokuthanda umyeni, njengemikhonyovu, luyakwazi ukuhluka emandleni omthelela, ngaphezu kwalokho, unenkathi ehlukile yokusebenza. Kuxhomeke ngokuqondile ngamakhono omuntu oqhuba ukuphathwa (okungukuthi, amandla akhe) nokuthi amandla noma obuthakathaka yini okusikisela (yiwona amandla akhe angokomoya, hhayi ngokomzimba), futhi kufanele azinake ukuthi ngabe akakondli yini Akukho uthando olufihlekile lomuntu (kulokhu, ngisho nokushaya umyeni osemthethweni kungaba nzima kakhulu).
Izinhlobo zothando zisho
Kuwo wonke umlando wokuthuthukiswa kwentuthuko yabantu, umcabango wokubamba umyeni wabuzwa inombolo enkulu yabesifazane. Ngakho-ke, kunezinhlobonhlobo eziningi zalesi senzo.
Uthando uphawula kumyeni usebenzisa isithombe. Lolu khetho lungcono ngoba into ayidingi ukuthululwa ekudleni noma ekuphuzeni, futhi nokuyithonya ngokomqondo. Isithombe esanele, esichaza umyeni. Kufanele kube yamuva nje, kufanele ibonakale ngokucacile emehlweni. Inzuzo enkulu ukuthi umfazi angasondelana nomyeni wakhe, kanti lo mdlali, ethatha izithombe ngeposi noma kwi-Intanethi, uzohlanganyela emikhosini.
Indlela yokushaya indoda ngezingubo? Njengoba ungase ucabange, kuzodingeka ube nento ethi into ephethwe ngayo. Kungcono uma ngokuphindaphindiwe nangokuqondile emzimbeni. Okungukuthi, uma kunokwenzeka, kungcono ukhethe ihembe ngaphezu kwejajethi. Njengomthetho, izinhlamvu zifundwa yinto, bese ibuyiselwa kumnikazi.
Uthando uphawula umyeni wakhe ngegazi. Le miyambo ingahluka kakhulu. Ngokuvamile lokhu kuyipelomandla enamandla kumyeni, okungeke kuthiwe kungenabungozi. Okuphumelela kakhulu yizinto ezihambisana negazi lokuya esikhathini kwabesifazane kanye nemikhuba enehlengolo ebeka umuntu into. Amaphilisi asebenza kahle ngegazi lesisulu (isilwane, inyoni).
Indlela yokushaya indoda enenwele? Kuzodinga futhi izinwele zayo, lapho kuzokwenziwa khona ukushintsha ukuzwelana kwezinto.
Ukushada komshado , izindandatho zomshado, amathawula womshado nezinye izinto eziningi zivame ukusetshenziselwa ukubamba izinhlamvu.
Indlela yokuqonda uma kufaneleka ukwenza isipele esithile sothando?
Uma imizwelo isuka esikalini, kubonakala sengathi zonke izindlela zilungile ekufinyeleleni umgomo. Kodwa akunjalo! Futhi imiphumela ingaba yingozi. Ukunciphisa kangcono kunsizakalo yalabo bantu abanikeza ukuchitha isipelingi kumyeni, emibhalweni nasezenzo ezicacile ukuthi kukhona isikhalazo emandleni obubi. Lokhu kungacatshangwa ezimweni ezinjalo:
Umkhuba ngokwawo kufanele ubanjwe emathuneni.
Sidinga izinto zomuntu oshonile, umhlaba kusukela emathuneni nasezimfanisweni ezifanayo.
Ukusetshenziswa kwezimpawu zomphik'ukristu, noma yiziphi izimpawu zezinkolo eziphambene (iziphambano ezingenayo , njll).
Kungenzeka yini ukuqonda ukuthi isipele senziwe ngumphikisana?
Yebo, kungenziwa. Ngokuvamile, ukufisa owesifazane ongaphandle akuyona kuphela isibonakaliso. Ngokujwayelekile, uma isipele sothando senziwe ngumphikisana, umuntu uyashukunyiswa kabi, ephuthumayo, enomzwelo noma, ngokuphambene nalokho, akanandaba.
Ngaphezu kwalokho, into iyaqala isikhathi sokuhluleka. Okwakungakaze kube yisikhathi esidlule kwakulula futhi ngaphandle kwezinkinga, manje kubonakala kungumsebenzi ongenakwenzeka. Lokhu kushintsha uhla lwezintshisekelo. Ngokuqondile, itholakala kumuntu oyedwa kanye nomuntu oyedwa ikhasimende le-spell.
Izinkinga zezempilo ziqala. Ngokuvamile, ukupela okuqinile kumyeni wakhe kubangela lokhu okulandelayo: ukulele, ukuphazamiseka emsebenzini wesimo senhliziyo. Kunezinsizwa, izinkinga zokudla.
Ngokuvamile umuntu akaqapheli izinguquko ekuziphatheni kwakhe, futhi uma ekhonjiswe kuwo, ukholelwa ukuthi akazwa okungaphezu kwe-nitpicking engenalutho nokucabangela. Futhi ngokuqinisekile akakholelwa ithonya lomuntu kuye ngaphandle, okungukuthi, okwenziwe ngophawu lomunye kumyeni wakhe.
Indlela yokunquma - icacile. Futhi kuthiwani ngekusasa lomuntu owaqala konke lokhu?
U-Privorot kumyeni: imiphumela
Ngeshwa, akuyona yonke into ephela ngendlela engafanele. Kwenzeka ukuthi ukupela ngothando kuyenzelwe ngisho nomlingani othandekayo nomthetho osemthethweni, kodwa inkosikazi engeyona ingcweti ephendula kakhulu kubantwana ngisho nabazukulu bomshado oshadile. Bangathola ukuphazamiseka empilweni yabo siqu kanye nezinkinga zempilo, kubandakanya ukungasebenzi.
Ngakho udinga ukuhlola ngokucophelela yonke imiphumela. Phela, asibona onkulunkulu. Futhi kungenzeka ukuthi akufanele ungonakalise oshade naye, othe wanquma ukuhamba omunye. Mhlawumbe maduzane uzohlangabeza isiphetho sakho sangempela, futhi ubonge uMqondo oPhakeme ngokuba unqabe umshado ongaphumeleli.
Uma, noma kunjalo, uqonde ukuthi othile ungenele emshadweni wakho, khona-ke udinga ukubheka inkosi engakwazi ukususa isipele. Njengendlela - khetha ukuya esontweni bese uthandaza. Phela, akukho lutho olungenakwenzeka kumuntu okholwayo futhi ufuna okuhle. Funa izindlela zokukhulula umuntu othandekayo kuwe kulokho okushiwo ngaphandle! Lokhu kuzokwenzeka nakanjani, nakuba kungenjalo ukuthi kuyoba lula.
Ngakho kufanele? Futhi uma kunjalo, kanjani?
Njengoba ososayensi bethi, kunconywa ukwenza i-privoroty eqinile kakhulu ezimweni ezihlukile. Kwezinye izimo, ngokuvamile kuvamise ukulula okulula, okuzovumela into ukuba ikubuke ngamehlo ahlukile. Futhi uma uziphatha kahle - umphumela uzoba imizwa yangempela. Ngempela, noma yikuphi ukupela, ngisho nokuhle, ngokushesha noma ngokuhamba kwesikhathi kuyashintsha. Futhi uma imizwa yangempela ingabonakali - umuntu uzohamba.
Ukuqhubeka - enye yezindlela ezilula kodwa eziphumelelayo.
Kumelwe kuthiwa ngokushesha ukuthi le sipelingi kumyeni wayo enezithombe negazi - okukhethwa kukho ukubiza inzalo ekhulayo nokuyisebenzisa ngobuchule. Futhi ngaphesheya kwalokho, konke kuxhomeke kuwe.
Uzodinga lokhu: isithombe sento nesithombe sakho, isibani, ikhandlela elibomvu, inaliti ebukhali, i-ashtray.
Ukwenza umkhuba kungcono ngenyanga ekhulayo.
Ngakho, faka isithombe phambi kwakho. Gxila kubo. Cabanga ukuthi usuvele uhlangene, uhamba kahle, izinhliziyo zakho zigcwele imfudumalo nenjabulo. Ngesikhathi esifanayo, ikhandlela kufanele ivuliwe. Ngemuva kwemizuzu engu-10-15 yokuzindla okunjalo, lapho izithombe zizinzile, ungakwazi ukumbamba umunwe wesandla sokunxele. Ihlazi legazi kufanele liwele esithombeni sento. Lena yindlela eya enhliziyweni yakhe. Phinda futhi, cabanga ngakho konke ofuna ukukudlulisela kumuntu. Futhi wabeka isithombe sakho phezulu kuso. Manje khanyisa izithombe ngekhandlela. Umlotha kufanele uhanjiswe emoyeni noma uhlakazeke ngaphansi kombundu wento.
Isivivinyo sokusebenzisa imilingo sikhulu. Ngaphezu kwalokho, manje uyazi ukuthi ungayiphatha kanjani indoda yakhe. Kodwa ingabe kufanele? Futhi uqinisekile ukuthi lo muntu oyidinga? Kunoma yikuphi, inhlanhla nenjabulo ngothando!
Uthando olunamandla luchaza uthando olungenakususwa
Isiqephu senhlanhla: imiphumela nempendulo
Izidalwa ezingcolile ezitholakala eplanethi yethu
Igama leVasilin. Okushoyo esikhathini esizayo
Izigijimi zaseScandinavia: izinkomba nje noma uhlelo lokusebenza olusebenzayo ngempela?
Ukukhishwa kwama-amademoni amademoni: imithandazo, ukufundwa kokuhlola, izinyathelo zomthetho. Ukukhishwa kwe-exorcism
Imajarini: ukwakheka kanye izakhiwo umkhiqizo
Iyini i-phimosis ezinganeni?
I esibi kunazo isilwane emhlabeni: bemvelo, egcwele lezimanga
ACTH (hormone) - kuyini? ACTH
Kanjani ukuze uthole credits "Varfeys"? Kuphi futhi kanjani ukuthola imali ebolekiswayo, "Varfeys"?
Inkokhelo LC Amasevisi "Business Line". "Ukuvinjwa yokukhokha" - kusho ukuthi lokhu isimo
Inkukhu umucu. Indlela ukupheka okwehla esiphundu
Ukwelukwa Direct sendikimba fenechek
Q & A: Ingabe kungenzeka ukugeza hamsters?
Human papilloma virus: ukwelashwa kumele!
Tyurkskiy Kaganat, inkolo KaMose umlando
Izinto eziyinhloko ukuthi sithole impilo yomuntu